Uhlu Lokuhlola Ikhasi Lomkhiqizo Wakho We-Ecommerce Imininingwane | Martech Zone
NgoLwesithathu, Okthoba 5, 2016 Douglas Karr
Sisanda kusiza isiza se-e-commerce ukukhulisa ubukhona babo bewebhu. Babeqhuba isoftware ephathelene ngakho-ke babenenqwaba yemisebenzi yokuthuthukisa ababengayenza ukuthuthukisa izinga lokusesha lilonke. Kodwa-ke, noma ngabe kunikezwe lezo zivimbamgwaqo, bekunamathuba amakhulu okwenza lokho khuphula izinga lokuguqulwa. Siphinde sakha inkampani kabusha ukuze senze ukubukeka nokuzwakala kube kwesimanje, sisungule izwi ebeligunyaziwe futhi lithembekile, futhi sibasizile ukuthi baphinde baphinde basebenzise i-web interface yabo kanye nokuxhumana nge-imeyili ukuze baphendule ngomakhalekhukhwini. Umphumela wokugcina waba amazinga okuguqulwa angaphezu kwamaphesenti angama-23% ngaphezulu kuka yebor ngalezo zinguquko kuphela.
Izinkampani kwesinye isikhathi zibanjwa kakhulu futhi zikhungatheke ngakho konke okufanele zikwenze esikhundleni sokusebenza ohlwini lwezinto ezingalungiswa. Konke ukuthuthuka kuyanezela… futhi njengoba uqhubeka nokuthuthukisa ulwazi lokuthenga lomsebenzisi ngokuya ngokuya, lezo zinombolo zingaba nkulu. Kuleli klayenti, lezo zinombolo zingakhiqiza izigidi zamaRandi emgqeni.
Ngaphezulu kwe-Fold Ecommerce Product Page Elements
Ngenkathi ngiyithanda le infographic, kungenzeka ukuthi bakhohlwe enye yezinto ezibaluleke kakhulu kunoma iyiphi isayithi le-ecommerce ngokujwayelekile… an usesho lwangaphakathi ifomu! Abasebenzisi abaningi bazofika ekhasini lomkhiqizo kusuka ekusesheni, kwezenhlalo, noma kuzikhangiso kepha umkhiqizo kungenzeka ungabi yilokho abakufunayo. I-30% yezivakashi zesayithi lakho le-ecommerce zizosebenzisa usesho lwangaphakathi
Izilinganiso Schema Tags
Izindleko Zokuhambisa Zamahhala noma Zokuhambisa
Intengo ye-Schema Tag
Faka ku-Cart noma ku-Buy Button
Izinkinobho Zokwabelana Komphakathi
Ngezansi kwezinto ze-Fold Product Page
Uma ufuna ukubona inkampani evivinya ithani futhi ithola imiphumela emangalisayo, hlola amakhasi womkhiqizo we-Amazon. Ngicabanga ukuthi izinkampani zivame ukuba namahloni ngokwengeza izici nokusebenza kumakhasi wazo womkhiqizo. Ulwazi olwengeziwe, lungcono. Akufanele wenze izivakashi zakho ukuthi ziseshe kude ukuthola imininingwane eziyidingayo ukwenza isinqumo sokuthenga.
Umkhiqizo SKU / Ikhodi
Amafonti ahlanzekile futhi alula ukufunda
Ukubuyekezwa Kwekhasimende Okuningiliziwe
Buyekeza Ifomu Ukushiya Isibuyekezo
Izakhi Zekhasi Lomkhiqizo Waphansi
Sincoma i Inkampani isixhumanisi sokuletha abantu ekhasini elihlukanisa inkampani yakho nezimbangi zakho. Izithombe zabasebenzi bakho, indawo yakho, nanoma yiluphi uhlobo lokupha noma izinkanuko onazo kufanele zibe khona ukuzibandakanya mathupha.
Izinketho Zesevisi Yekhasimende
Izixhumanisi zokubuyisa inqubomgomo, inqubomgomo yokubuyiselwa kwemali, nenqubomgomo yokuthumela
Izixhumanisi Zamakhasi Omkhakha Omkhulu Womkhiqizo
Izixhumanisi eziya Kumakhasi Ezindaba Zomphakathi
Ifomu lokubhalisela iphephandaba
Izinto ze-SEO zekhasi lomkhiqizo
Ukwenza kahle kosesho kudinga ukuthi zombili izinto ezibonakalayo neze-meta zakhiwe kahle futhi zisetshenziswe ekhasini lakho. Ngisho nokusetshenziswa kwezihlokwana, umbhalo obhalwe ngokugqamile, nokugcizelela kungenza umehluko.
Lungiselela isihloko sekhasi
Lungiselela Incazelo Ye-Meta
Igama lomkhiqizo ku-H1 Tag
Umkhiqizo Wesithombe Amathegi
I-Google Search Console (i-Webmasters)
Isakhiwo se-URL Yokusesha Enjini Yokusesha
Izidingo Zobuchwepheshe bekhasi lomkhiqizo we-Ecommerce
Amathegi ama-scheme ashiwo ngenhla, kepha amathegi we-Opengraph wokuhlanganiswa komphakathi nawo mahle ukuba nawo ukuze ucacise isithombe, isihloko kanye nencazelo yomkhiqizo lapho kwabelwana ngawo ku-inthanethi.
Iyalayisha Ijubane lekhasi
Landa i-Ebook kumklamo wekhasi lomkhiqizo
Nayi i-infographic ephelele evela ku-99MediaLab, Izici Zokwakha ezingama-49 Imininingwane Yakho Yomkhiqizo Kumele Ube Nayo:
Tags: Umabhebhanaikhasi le-ecommerceizinto zekhasi le-ecommerceikhasi lomkhiqizo we-ecommerceimininingwane yekhasi lemininingwane yomkhiqizoikhasi lomkhiqizoizakhi zekhasi lomkhiqizo